Somaliland oo ka qayb gashay shir maalgashi loogu samaynaayo Somaliya. | Salaan Media
Somaliland oo ka qayb gashay shir maalgashi loogu samaynaayo Somaliya.
Somaliland oo ka qayb gashay shir maalgashi loogu samaynayo Somaliya
Published on May 28, 2013 by Admin USA Washington · 1 Comment
Daawo Wasiirka Calanka Somalia oo xagiisa danbe ku yaala
Kiiniya(SM) 28/05/2013 Wakiilka Somaliland u fadhiya Dalka Kiiniya Maxamud Jaamac Sifir ayaa ka qayb galay shir maal-gashi loogu samaynayo Somaliya, kaasoo ka socda Dalka Kiiniya.
Wakiilka Somaliland Maxamud Jaamac sifir waxa uu sheegay in shirkaasi lagu soo casuumay isla markaana ay Xukuumad ahaan ku qanacsan yihiin wixii Maal-gashi ah ee loo samynayo Somaliya.
“ shirka waanu ka qayb galnay oo waa mid Ganacsi oo Somaliya loo qabanayo, waxa ka soo qayb galay shirkaddo waaweyn oo lagu soo casuumay sida Dahabshiil oo kale, sidaas oo kale ayaa anana naloo soo casuumay” ayuu yidhi
Shirkan ayaa waxa soo qaban qaabisay shirkad Ganacsi oo ay u qaban qaabiyeen Rugta Ganacsiga Somaliya iyo ta Kiiniya, waxaanu socon doonaa laba maalmood.
Lama oga hadalka Wakiilka Somaliland u fadhiya Kiiniya in ka qayb galku ku kooban yahay iyo in Xukuumadda Dhexe la ogtahay, maadaama Somaliland ay si cad u diiday shirarka Somaliya dhaqaalaha loogu ururinayo gaar ahaana kii ugu danbeeyay ee Ingiriiska ka dhacay.
Sidoo kale, Madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo dhawaan xafiiskiisa ku qaabilay Safiirka Midawga Yurub ee Somaliya ayaa sheegay marti-qaad uu ka helay shir Somaliya loo qabanayo oo dhaqaale loogu raadinayo in uu ka fiirsanayo.
Si kasta ha ahaatee talaabada Wakiilka Somaliland kaga qayb galay shirkaasi waxa uu u baahan yahay Xukuumadda Somaliland in ay tafaasiilo ka bixiso sababta kaliftay iyo danta shirkaas ugu jirta.